Yakakwira-mhando Oxiracetam Powder Ita Kuti Ndinzwe?
Oxiracetam chiitiko: oxiracetam powder inoita kuti ndinzwe sei?
Chii chinonzi Oxiracetam?
Oxiracetam ndeimwe yekare nootropic zvokuwedzera kubva kumhuri ye racetam. Yaive yechitatu racetam komponi mushure me piracetam uye aniracetam uye yakatanga kugadzirwa muma1970. Oxiracetam inogadzirwa nemakemikari eiyo yekutanga racetam, piracetam.
Kufanana nemamwe maracetams, oxiracetam ine pyrrolidone pamusoro wayo. Zvisinei, oxiracetam ine boka rehydroxyl, ndosaka rakanyanya simba kupfuura iro mubereki mubatanidzwa, piracetam.
Inozivikanwa nekugona kwayo kugadzirisa basa rekuziva senge ndangariro, kutarisa uye kudzidza pamwe nemhedzisiro inosimudzira yainopa. Oxiracetam nootropics inowanzo simbisa hutano hwako hwepfungwa.
Oxiracetam powder: Chii chinonzi Oxiracetam Chinoshandiswa?
Kune akasiyana siyana oxiracetam anoshandiswa akataurwa nevatsvakurudzi pamwe nezviitiko zve oxiracetam zvakagovaniswa pamapuratifomu akasiyana.
Oxiracetam, senge chero imwe racetam, inoshandiswa kusimudzira kugona nekuvandudza kugona kwekuumba ndangariro dzepfupi-uye refu-refu. Saka ndizvozvo inoshandiswa nechero munhu anoda kudzidza nekurangarira ruzivo. Iyo yakanakisa kune vadzidzi vanofanirwa kubudirira mumabvunzo avo, sezvo ichaenda nzira refu mukuvabatsira kudzidza nekurangarira zvigadzirwa zviri nyore. Izvo zvakare zvinovabatsira kutarisisa uye kuramba vakatarisa kwenguva yakareba.
Oxiracetam inoshandisa zvakasarudzika nekuti inopa kusimudzira kwekuziva apo ichikurudzira pfungwa dzako kuti dzirambe dzakatarisa nekungwarira. Chinhu chakanakisa nezve ayo anokonzeresa mhedzisiro ndeyekuti kusiyana nezvimwe zvinokurudzira izvo zvinosiya kumwe kunzwa kusanzwisisika uye kusagadzikana, oxiracetam inokurudzira pfungwa uye kukusiya iwe wakadzikama uye wakasununguka. Kune vashandi vanonyatsoda kutarisisa uye kutariswa, iyo oxiracetam chiitiko haina mubvunzo.
Tsvagiridzo zvakare inoratidza oxiracetam inoshandiswa pakurapa kudzika kwekuziva kusanganisira ndangariro kuderera kune varwere vane chirwere cheAlzheimer nekupa neuronal dziviriro.
Kana semuenzaniso mumwe ari kugadzirira kubvunzurudzwa, zvichave zvakakosha kuti utaridzike sewakangwara. Oxiracetam inovandudza kutaura kwakatsetseka kunobatsira vanhu kushandisa mazwi akakwana anowedzera mikana yavo yekumisa mabasa avo ekurota.
Oxiracetam poda iri zvakare sarudzo ye kuvandudza chiyeuchidzo mune vakwegura vanowanzo shungurudzika nekukanganwa ndangariro kana kuderera.
Sezvo miviri yedu isingaburitse oxiracetam yega, kukohwa iyo yakati oxiracetam inobatsira iwe unenge uchitarisa oxiracetam kutenga kubva kune vanovimba vatengesi. ?????
Nyowani yekutsvagisa kwevanhu kwakavakirwa pavanhu vakura uye vanhu vasina hutano, nekudaro kutsvagisa pamusoro pevanhu vane hutano kungave kuri madikanwa kusimbisa oxiracetam inoshandisa. Nekudaro, yako oxiracetam ongororo inoratidza kugona kweiyo oxiracetam mune vane hutano uye vechidiki vanhu.
Oxiracetam: Inoshanda Sei?
Kunyange zvakadaro, oxiracetam mabhenefiti anonyatso kuzivikanwa mashandiro ekuita nawo anoshanda achiri kuzotsanangurwa zvakajeka. Nekudaro, akati wandei oxiracetam modes ekuita anotaurwa.
Pazasi pane mamwe eiyo oxiracetam nzira dzekuita;
i. Inodzora iyo neurotransmitter, acetylcholine
Aya maurotransmitter maviri ari kuita basa rakakosha mukukwanisa kwedu kuumba zvese zvenguva pfupi-neyerefu-refu ndangariro, kudzidza uye nekugona kwese kushanda.
Oxiracetam inokonzeresa cholinergic uye glutamate masisitimu nekudaro ekugadzirisa kuburitswa kweaya akakosha maurotransmitter, acetylcholine ACh uye glutamate.
Kunyanya, oxiracetam inowedzera kunzwisisika kweacetylcholine receptors. Inoita izvi nekusimudzira enzyme yeprotein kinase C (PKC) iyo inokanganisa iyo M1 acetylcholine receptors.
Oxiracetam nootropic inoratidzwawo kuti inokwanisa kugadzirisa zvakagamuchirwa zvakagadziriswa saka inovimbisa yakakwira mamazinga eACh ane hukama nekuziva basa.
ii. Psycho-inosimudzira zvivakwa
Oxiracetam nootropics inopa zvinyoro-nyoro zvinokonzeresa kune yepakati tsinga system.
Oxiracetam inowira mumhuri yeampakine yemakemikari. Ampakine inozivikanwa kuratidza inokurudzira zvinhu. Iyo ampakine mishonga inokanganisa iyo glutamatergic AMPA receptors. Nenguva isipi, kusiyana nezvimwe zvinokurudzira zvakadai se caffeine inokusiya iwe usina kurara uye kutya, ampakine haikusiye iwe nemimwe migumisiro yakaipa.
Oxiracetam saka inopa zvinokurudzira zvinokuchengetedza iwe wakangwarira uye wakanangana nekukusiira iwe pfungwa nemuviri wakadzikama uye wakasununguka.
Uye zvakare, oxiracetam inogona kusimudza iwo mazinga epamusoro-simba phosphates ayo anoita basa mukusimudzira simba uye kuwedzera pfungwa.
III. Modulate iyo glutamate system
Oxiracetam inokanganisa iyo glutamate system uyezve inokanganisa kuburitswa kweiyo neurotransmitter, glutamate. Inopa mhedzisiro ine simba uye kwenguva yakareba.
Glutamate ndiyo imwe yeanonyanya kutsetseka neurotransmitter muiyo neural system inowanzo kutumira masaini kuuropi nemuviri wese.
Glutamate inoita basa rakakosha mukuziva mashandiro uye zvakanyanya nekudaro nekudzidza.
Iv. Inowedzera kutaurirana pakati peeuroni
Zvimwe zvidzidzo zvinoratidza kuti oxiracetam inowedzera kutaurirana pakati peeuron mune hippocampus. Hippocampus ndiyo chikamu chehuropi chinokanganisa ndangariro, manzwiro, uye yepakati tsinga system.
Oxiracetam inozadzisa izvi nenzira mbiri. Imwe iri kuburikidza nekukonzera kuburitswa kweD-aspartic acid uye chechipiri, nekukanganisa lipid metabolism. Lipid metabolism inovimbisa kuti pane yakakwana simba rezvepfungwa rinodiwa kune maonon inoshanda.
Oxiracetam Mhedzisiro & Bhenefiti
Kune huwandu hwakawanda hwe oxiracetam mabhenefiti akataurwa kunyangwe hazvo kuwedzera kwacho kusingatenderwe neKudya neDrug Administration (FDA).
Pasi apa oxiracetam inobatsira;
i. Kunowedzera ndangariro uye kudzidza
Oxiracetam inozivikanwa kwazvo nekuda kwekugona kwayo kuwedzera memory. Iyo inovandudza kuumbwa kweyekuyeuka nyowani pamwe nekuwedzera kumhanyisa kunoitwa nepfungwa uye nekurangarira ruzivo.
Oxiracetam inowedzerawo ndangariro nekudzora kukanganisika kweiyo neuron, kudzora lipid metabolism muuropi, kuwedzera kuyerera kweropa pamwe nekudzivisa kushandiswa kweastrocyte.
Ropa kuyerera munzvimbo yecerebral kwakakosha kwazvo kuona kuti oxygen yakakwana inosvika kuuropi kuitira kushanda kwakanaka kwehuropi kusanganisira ndangariro.
Uye zvakare, kushushikana kweiyo oxidative kunogona kuitika nekuda kwezvikonzero zvinoverengeka uye kana kusadzora kunogona kukonzera kukuvara kweiyo neuronal. Oxiracetam yekuwedzera vauya kuzonunura nekuvandudza kukanganiswa kwemitsipa.
Kupfuurirazve, oxiracetam inokurudzirwa kuti igadzirise kwenguva yakareba potentiation pamwe nekuda kwekuwedzera kuburitswa kwe glutamate uye-aspartic acid mune hippocampus.
Mune ongororo yevakuru makumi matanhatu vane ruzivo rwekuderera, oxiracetam muyero we60 mg katatu zuva rega rega yakawanikwa ichikurudzira zvakanyanya ndangariro ichidzikisa zviratidzo zvekuziva kwekudzikira.
Mune kumwe kuongorora kwevanhu makumi mana vechikuru vane dhementia, oxiracetam pa40 mg zuva nezuva yakawanikwa ichivandudza kwenguva pfupi ndangariro pamwe nekutaura kwakatsetseka.
ii. Inowedzera kutarisisa uye kutarisisa
Paunotarisana nebasa rinoda kutariswa zvizere kwenguva yakareba, oxiracetam inogona kunge iri sarudzo yakanakisa. Oxiracetam hafu-yehupenyu ingangoita maawa 8-10 uye saka inogona kupa mabhenefiti akareba.
Oxiracetam inogona kukubatsira kuti uise pfungwa pabasa kwenguva yakareba pasina kurasikirwa nekutarisisa uye kutarisisa. Oxiracetam inoenderana nekugadzirwa kwesimba muuropi saka inopa simba rinodiwa kuti riise pfungwa pabasa kwenguva yakareba pamwe nekudzidza zvinhu zvitsva zviri nyore.
Oxiracetam inopa zvinyoro zvinosimudzira mhedzisiro iyo inokubatsira iwe kutarisisa pasina kurasikirwa nechido uye kutarisisa.
Mune miedzo miviri yevanhu inosanganisira makumi mapfumbamwe nevatanhatu vanhu vakura vane dementia uye imwe yacho inosanganisira vanhu makumi mana nevatatu vane basa rakadzikira rehungwaru, oxiracetam yekuwedzera yakawanikwa kuvandudza nguva yekuita pamwe nekutarisa.
III. Neuroprotective mhedzisiro
Oxiracetam yekuwedzera ine neuroprotective mabhenefiti sezvo ichikwanisa kuchengetedza iyo huropi fomu kukuvara uye kugona kwekuziva semhedzisiro yezera kana kunyange kukuvara kwehuropi.
Oxiracetam inogona kupa dziviriro kuuropi kubva mukukuvara kunokonzerwa neAlzheimer kusagadzikana pamwe nezvimwe zvinokanganisa kuora mwoyo.
Ongororo dzinoverengeka dzemhuka dzinoratidza kuti oxiracetam inogona kudzivirira uropi kubva mukukuvara. Semuenzaniso, mune ongororo umo maurotoxin akaunzwa kuti akanganise kuumbwa kwendangariro sekukuvara kwehuropi, pre-kurapwa ne oxiracetam yakawanikwa kudzivirira neurotoxicity.
Zvimwe zvidzidzo zvakaratidza kuti, post-kurapwa kweiyo oxiracetam inogona kudzivirira makonzo kubva kune ischemic sitiroko nekudzora iyo yeropa huropi chipinganidzo kusagadzikana.
Mune chidzidzo chevanhu chevarwere zana nemakumi mana vanorwara nesitiroko nekuda kwekukwira kweropa (hypertension), oxiracetam yaishandiswa pamwe ne nerve growth factor (NGF). Mushonga uyu wakawanikwa uchibatsira huropi kupora uye zvakare kuwedzera kurarama. Chidzidzo ichi chakaramba chichiwedzera kuderedzwa kuzvimba uye inowedzerwa mhasuru simba izvo zvinoratidza kupora mushure mekukuvara kwehuropi.
Iv. Kunowedzera kuona kwepfungwa
Oxiracetam inokanganisa nzira yatinoona nayo zvinhu kuburikidza nepfungwa shanu dzekuona, kunhuwidza, kubata, kunzwa uye kunyange kuravira.
Paunotora oxiracetam inowedzera hutachiona hwekuyerera kweropa hunoita kuti pfungwa dzione zviri nani nekuronga pamwe nekuturikira zvatinoona.
Kuvandudzwa kwekunzwisisa kunoreva kuita zvirinani kuita sarudzo nenzira yakadzikama.
v. Inovandudza kutaura kwemashoko
Oxiracetam inoratidzirwa kuti iwedzere kushanda kwehuropi uye inogona kuvandudza mazwi ekutaura. Kutaura kwehunyanzvi ndechimwe chekuziva basa iro rinotibatsira kutora ruzivo kubva mundangariro dzako.
Mune ongororo yevanhu makumi manomwe nevatatu vanotambura neakawanda-infarct dementia (MID) kana yekutanga degenerative dementia (PDD), oxiracetam yakawanikwa ichidzivirira kudzikira kwekuziva pamwe nekuvandudza zvakanyanya izwi ravo nekushama.
isu. Inowedzera kusvinura
Kuramba wakamuka uye wakanangana kwakakosha kuti ushandise zvakakwana. Oxiracetam inopa zvinyoro zvinosimudzira mhedzisiro iyo inobatsira iwe kuramba wakamuka nekuwedzera kuyerera kweropa muuropi.
Mukudzidza kwevanhu mazana maviri nemasere vane chirwere chedementia, oxiracetam yakawanikwa ichivandudza mashandiro ekuziva. Izvo zvave zvichitaurwawo kuti zviwedzere kusvinura zvichidzikisa kushushikana uye kutya.
Oxiracetam Powder: Maitiro eDosi?
Zvichienderana nemakiriniki miedzo yakakurudzirwa oxiracetam muyero ndeye 750-1,500 mg pazuva. Iyo oxiracetam dosage inopatsanurwa kuita miviri miviri inotorwa mangwanani-ngwanani nemambakwedza.
Iwe unofanirwa kudzivirira kutora oxiracetam yekuwedzera mumanheru sezvo iine zvinyoro zvinokurudzira zvinokanganisa zvinogona kukanganisa kurara kwako.
Sezvo oxiracetam iri soluble yemvura inogona kutorwa nenzira yehwendefa, kapsule kana kunyange fomu yehupfu, iine kana isina chikafu.
Kutsvagurudza kunoratidza kuti oxiracetam inotora maawa anosvika 1-3 kuti isvike nhanho dzayo yepamusoro muSerum uye nekudaro inofanira kutorwa awa rimwe basa risati ratarisirwa senge chiitiko chekudzidza. Iyo oxiracetam hafu-hupenyu ingangoita maawa gumi nemasere uye iwe unofanirwa kutarisira kusvika pakakwirira kuita munguva yevhiki.
Kunyangwe, zvimwe zvidzidzo zvakashandisa yakakwira oxiracetam madosi anosvika ku2,400 mg zuva nezuva, gara uchitanga kubva kune yakaderera inoshanda muyero inokwira kumusoro zvichidikanwa.
Mukuwedzera, sezvo oxiracetam inowedzera kushanda kweacetylcholine muuropi, iva nechokwadi chekuiisa neine yakanaka choline sosi senge Alpha GPC kana CDP choline. Izvi zvinokubatsira kudzivirira zvakajairwa oxiracetam mhedzisiro kunyanya misoro nekuda kwekukwana choline muuropi.
Oxiracetam Side Mhedzisiro
Oxracetam nootropic inowanzoonekwa yakachengeteka uye inoregererwa nemuviri.
Nekudaro, mamwe oxiracetam mhedzisiro mhedzisiro iyo yakataurwa inosanganisira;
Kutemwa nemusoro- izvi zvinoitika kana munhu akanganwa kuisa oxiracetam ine yakanaka choline sosi. Musoro unoitika nekuda kwekukwana choline muuropi. Izvi zvinogona kudzivirirwa nekutora oxiracetam stack ine choline sosi senge Alpha GPC.
Kusarara uye kusagadzikana zvakajairika oxiracetam mhedzisiro. Ivo vanonzi kana mumwe achitora zvisina kujairika madhizaini eiyo oxiracetam kana anotora chinowedzera manheru. Kuti udzivirire iyi oxiracetam mhedzisiro, gara uchitora yakadomerwa dosi uye ita kuti ive tsika yekutora oxiracetam masikati asati asvika kuti udzivise kukanganiswa kwekurara.
Zvimwe zvinogona oxiracetam mhedzisiro zvinosanganisira;
Manyoka kana kupatira, uye
Oxiracetam Inopa Mazano
Oxiracetam poda inoshanda zvakanyanyisa kusimudzira kugona uye kukurudzira iyo yepakati tsinga system yega kana mukubatana nezvimwe zvinowedzera.
Kungofanana nedzimwe mhirizhonga, Oxiracetam stack ine choline sosi yakakosha. Kuimisikidza naAlfa GPC hakungogadzirise mhedzisiro yaro asi zvakare kunobatsira kudzivirira kuitika kwemusoro unonyanya kusangana nekushomeka kwecholine muuropi.
Iyo oxiracetam alpha GPC stack dosi inogona kunge iri 750 mg ye oxiracetam uye 150-300 mg yeAlfa GPC inotorwa muzvikamu zviviri, mangwanani nemangwanani masikati.
Noopept ndeimwe yeakanakisa maootropic anozivikanwa kusimudzira kwese kugona kwekuziva uye anoshanda zvakafanana nere racetams.
Paunovhara oxiracetam ne noopept, iwe unotarisira kuona mamwe mashandiro ekushanda kusanganisira, ndangariro, kudzidza, kusvinura, kukurudzira uye kunyange kutarisisa.
Iyo muyero muyero weiyi stack unenge uri 750 mg ye oxiracetam uye 10-30 mg ye noopept, inotorwa zuva nezuva.
Unifiram chinhu che nootropic chakatorwa kusimudzira kugona uye ine chimiro chemakemikari chakafanana neicho chemaracetams. Nekudaro, kiriniki miedzo iri kushomeka uye izvi zvinoita kuti zviome kutaura izvo zvingabatira zvakanaka nazvo.
Asi zvakare, sezvo ichishanda zvakafanana kumaracetams, unifiram stack ine racetams inosanganisira oxiracetam inogona kukonzeresa kunatsiridza kugona kwekuziva. Iyo inoratidzirwa kuva ine simba kupfuura racetams uye nokudaro madosi akaderera kwazvo anozodikanwa kuti uwane mhedzisiro.
Kubva pane wega unifiram uye oxiracetam inosangana iyo muyero inofanira kunge iri 5-10 mg yeunifiram uye 750 mg ye oxiracetam inotorwa zuva nezuva.
-Oxiracetam uye Pramiracetam Stack
Oxiracetam inochengetera zvakanaka kwazvo mamwe ma racetams.
Paunoshandisa oxiracetam stack ne pramiracetam, iko kugona kwekuziva kwendangariro, kutarisisa uye kurudziro kwakasimudzirwa uyezve kugadzirwa kwako kunogona kuwedzera.
Iyo nyoro inosimudzira mhedzisiro ye oxiracetam inowedzerwazve nokudaro ichiwedzera kusvinura uye kutarisisa nekuda kwekuvandudzwa kwesimba repfungwa.
Muyero wakakurudzirwa weiyi stack ndeye 750 mg ye oxiracetam uye 300 mg yepramiracetam inotorwa kamwe chete zuva nezuva. Oxiracetam inogona kutorwa isina chinhu mudumbu kubvira pakagadziriswa mvura yayo nepo pramiracetam ichigona kuiswa mune yekutanga kudya sezvo iri mafuta-soluble yekuwedzera.
Oxiracetam nootropic inowanikwa nyore nyore online. Kana iwe ukafunga kutora oxiracetam zvitenge kubva kune anozivikanwa kupfuura ese nootropic vatengesi online. Funga kunyatsoongorora izvo nezve iyo chaiyo oxiracetam poda, makapisi kana fomu yepiritsi yakapihwa.
Kutarisa oxiracetam zviitiko zvakagovaniswa pamawebhusaiti ekambani iyi imwe nzira yekuvimbisa kuti iwe unowana zvauri kutsvaga.
Ongororo yeOxiracetam pane yevatengesi saiti ndeye kuvhura kwemeso kweakanakisa oxiracetam nootropics sezvo asiri ese achapa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro.
Dysken, MW, Katz, R., Stallone, F., & Kuskowski, M. (1989). Oxiracetam mukurapa kweakawanda-infarct dementia uye yekutanga inodzora dementia. Iyo Zvinyorwa zveeuropsychiatry uye yekiriniki neurosciences, 1(3), 249-252.
Hlinák Z, Krejcí I. (2005). Oxiracetam pre- asi kwete post-kurapwa inodzivirira kushomeka kwekuzivikanwa kwevanhu kwakaburitswa ne trimethyltin mumakonzo. Behav Brain Res.
Huang L, Shang E, Fan W, Li X, Li B, Iye S, Fu Y, Zhang Y, Li Y, Fang W. (2017). S-oxiracetam inodzivirira pakurwisa ischemic sitiroko kuburikidza nekudzora ropa reropa chipingaidzo kusagadzikana mumakonzo.Eur J Pharm Sci.
Maina, G., Fiori, L., Torta, R., Fagiani, MB, Ravizza, L., Bonavita, E., Ghiazza, B., Teruzzi, F., Zagnoni, PG, & Ferrario, E. (1989. ). Oxiracetam mukurapa kwekutanga kushomeka uye kuwanda-kwakawanda infarct dementia: yakapetwa-bofu, inodzorwa ne placebo-inodzorwa. Neuropsychobiology, 21(3), 141-145.
Rozzini R, Zanetti O, Bianchetti A. (1992). Kubudirira kweiyo oxiracetam kurapa mukurapa kwekushomeka kwekuziva kwechipiri kune kwekutanga kunodzikira dhementia. Accta Neurol (Napoli).
Zuva, Y., Xu, B., & Zhang, Q. (2018). Tsinga yekukura chinhu pamwe neOxiracetam mukurapa kweHypertensive Cerebral Hemorrhage. Pakistan pepanhau resainzi yezvokurapa, 34(1), 73-77.
1. Chii chinonzi Oxiracetam?
2.Oxiracetam powder: Chii chinonzi Oxiracetam Chinoshandiswa?
3.Oxiracetam: Inoshanda Sei?
4.Oxiracetam Mhedzisiro & Bhenefiti
5.Oxiracetam Powder: Maitiro eDosi?
6.Oxiracetam Side Migumisiro
7.Oxiracetam Anochengeta Mazano
8.Kupi kwekutenga oxiracetam